Nahoana no Maro Be ny Olona Mijaly?
Mifohaza! | Jolay 2011
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Zoloa
MISEHO ho mahalala ny valin’io fanontaniana io ny mpitondra fivavahana, ka matetika no mampianatra fa sazy avy amin’Andriamanitra ny fijaliana. Andro vitsivitsy taorian’ilay horohoron-tany tany Haïti, ohatra, dia nilaza tamin’ny mpiangona tao aminy ny mpitondra fivavahana iray fa te hilaza zavatra Andriamanitra matoa nisy iny loza iny. Tsy tena mino an’izany ny hafa. Milaza ny vehivavy amerikanina iray mampianatra momba ny fivavahana fa olona maro no toa mieritreritra toy izao: “Tsy fantatra hoe nahoana Andriamanitra no mampisy loza toy ireny, ary tsy anjarantsika ny manadihady momba izany. Mila mino fotsiny isika.”
Andriamanitra tokoa ve no “mampisy” ny fijaliana? Tsy izany velively, hoy ny Baiboly. Tsy fikasan’i Jehovah Andriamanitra ny hijalian’ny olombelona. Nanohitra ny fitondrany anefa ny mpivady voalohany ka nifidy ny fitsipika tiany harahina momba izay tsara sy ratsy. Nivadika tamin’Andriamanitra izy ireo ka nizaka ny vokany. Mizaka ny vokatry ny safidin’izy ireo koa isika ankehitriny. Tsy avy amin’Andriamanitra mihitsy anefa ny fijaliana. Hoy ny Baiboly: “Rehefa misy fitsapana, dia aoka izy tsy hilaza hoe: ‘Fitsapana avy amin’Andriamanitra izao.’ Sady tsy azo tsapaina amin-javatra ratsy mantsy Andriamanitra, no tsy mitsapa na iza na iza amin’izany koa.” (Jakoba 1:13) Mety hijaly ny olona rehetra, na dia ireo tian’Andriamanitra aza. Diniho ireto:
Matin’ny aretina i Elisa mpaminany.—2 Mpanjaka 13:14.
Nilaza ny apostoly Paoly fa ‘noana sy nangetaheta sy zara raha nitafy sy nampijalina sy tsy nanan-kialofana’ izy.—1 Korintianina 4:11.
Narary sy “tena kivy be” ilay Kristianina atao hoe Epafrodito.—Filipianina 2:25, 26.
Tsy milaza mihitsy ny Baiboly hoe nosazin’Andriamanitra izy telo lahy ireo satria nanota. Asehon’ny Baiboly àry fa tsy Andriamanitra no mahatonga ny fijaliana. Lazainy koa ny antony telo lehibe mahatonga izany.
“Izay afafin’ny olona ihany no hojinjainy.” (Galatianina 6:7) Azo antoka fa hizaka an’izay fijaliana vokatry ny ataony ny olona iray mifidy ny hifoka sigara, na tsy mitandrina rehefa mitondra fiara, na mandanilany ny volany.
Mety hijaly koa isika noho ny safidin’ny olona tia tena. Mahavanon-doza tokoa ny olombelona rehefa jerena ny habibiana nataon’ny Nazia sy ireo fampijaliana ankizy. Tsy mahay misafidy koa ny olona sasany ka mampijaly ny hafa.
Fisehoan-javatra Tsy Ampoizina
Nisy tilikambo lehibe iray nianjera tao Jerosalema, tamin’ny taonjato voalohany, ka 18 no maty. Hoy i Jesosy, rehefa niresaka momba an’ireo niharan-doza ireo: “Heverinareo ve fa mpanota kokoa noho ny mponina rehetra ao Jerosalema ireny? Tsy izany velively.” (Lioka 13:4, 5) Fantatr’i Jesosy fa tsy nosazin’Andriamanitra akory izy ireo. Fantany ilay voalazan’ny Tenin’Andriamanitra hoe: “Mety ho azon-tsampona izy rehetra amin’ny fotoana tsy ampoizina.” (Mpitoriteny 9:11) Maro no iharan-doza satria fotsiny sendra teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza na noho ny fahadisoan’ny hafa. Asehon’ny tatitra, ohatra, fa betsaka kokoa no mijaly rehefa tsy miraharaha fampitandremana ny olona, na tsy ataony mafy tsara ny tranony ka tsy mahatanty andro ratsy na horohoron-tany. Maro kokoa àry no mijaly noho ny fisehoan-javatra tsy ampoizina.
“Ilay Mpitondra An’izao Tontolo Izao”
Hoy ny Baiboly: ‘Eo ambany fahefan’ilay ratsy izao tontolo izao manontolo.’ (Jaona 12:31; 1 Jaona 5:19) I Satana Devoly “ilay ratsy.” Anjely mahery “mpitondra ny fahefan’ny rivotra” izy, ary mampiely “ny toe-tsaina izay miasa ankehitriny ao amin’ny zanaky ny tsy fankatoavana.” (Efesianina 2:2) Mampihoron-koditra loatra ny heloka bevava sasany, toy ny fandripahana foko sy ny fampijaliana ankizy, ka sarotra inoana hoe ny olombelona samirery no mahavita izany.
Midika ve anefa izany hoe tsy miraharaha ny fijaliantsika Andriamanitra? Vitany ve ny hamarana ny fijaliana? Hanao izany ve izy?
Hizara Hizara Nahoana no Maro Be ny Olona Mijaly?
MATOAN-DAHATSORATRA Tokony Hofaranana ny Fijaliana!
MATOAN-DAHATSORATRA Nahoana no Maro Be ny Olona Mijaly?
MATOAN-DAHATSORATRA Tsy Miraharaha Antsika ve Andriamanitra?
MATOAN-DAHATSORATRA Tena Hifarana ny Fijaliana
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Jolay 2011
Hizara Hizara MIFOHAZA! Jolay 2011
MIFOHAZA! Jolay 2011